Raspberry Pi 4-yakavakirwa CutiePi Iye Zvino Inowanikwa Yeku-Pre-Order ye $ 199 | Linux Vakapindwa muropa
Kubva ku2019 iyo nyowani Raspberry Foundation chirongwa chakaburitswa nechinangwa chekuti piritsi riwanikwe kune vashandisi 8 inch yakavakirwa paRaspberry Pi kadhi, inonzi CutiePi uye maererano timu yeCutiePi, Iyi piritsi inoratidzwa seye yakatetepa pasirese inogona kushandiswa muzviitiko zvakawanda.
Saka zvino Kuziviswa kwekuwanikwa kwayo pasi pe-pre-odhi pa $ 199 kwakaburitswa, apo chishandiso chichatengeswa kupedzisa vatengi pa $ 229 mushure meiyo pre-odhiyo chikamu. Chishandiso chakazvarwa nekutenda kumushandirapamwe wemari pamwe chete paKickstarter uye yatove muchikamu chekugadzira zvakawanda kuitira kuti igone kufanorongedzwa kuburikidza nechitoro chakakosha paShopify uye kuendesa kunofanira kutanga muna Chikunguru.
Nezve hunhu hwechigadzirwa iyo kambani inotarisira chirongwa ichi ine zvinotevera hunhu:
Screen: 8 inch IPS LCD skrini (1280 x 800)
Bhatiri: 5000 mAh Li-Po
Processor: BCM2711, Quad Core Cortex SoC - A72 (ARM v8) 64-bit 1,5 GHz, Raspberry Pi 4 Compute Module, Wireless, 2 GB Lite (CM4102000)
Kubatana: WLAN 2,4 GHz, 5,0 GHz IEEE 802.11 b / g / n / ac uye Bluetooth 5.0, BLE
Kamera: 5MP kumashure kamera (OV5647)
Zvinobatanidza: 1x USB Type-A, 1x USB Type-C (kuchaja uye OTG), 1x micro HDMI, 1x microSD slot
Zviyero: 206 (L) x 134 (H) x 14 (D) mm
Inoshanda System: OS Raspberry Pi + Shell CutiePi
CutiePi ine 2GB ye RAM uye Broadcom BCM2711 processor ine ina ARM Cortex-A72 cores inoshanda kusvika ku1,5 GHz.Uyezve, iyo 206 x 134 x 14 mm piritsi ine 8-inch IPS skrini inotsigira yekubata yekuisa, nepo zviyero uye kugadzirisa kwechidzitiro mumhando nyowani zvichiramba zvisina kuchinjika kubva pane yemhando yapfuura, pamwe neCutiePi zvakare ine diki yeHDMI chiteshi chekubatanidza piritsi kune yekunze yekutarisa.
Uyewo tinogona kuwana maikorofoni yakavakirwa, chinova chimwe chinhu nyowani iyo inofanirwa kuve inobatsira. Iyo CutiePi yakanamatira nevatauri ve2W kubva mumhando yapfuura hazvo, asi inogona kunge yakabvisa zviteshi zvitanhatu zveGPIO uye zvisingaite.
Iyo nyowani CutiePi inotsigira kusvika kuBluetooth 5.0 uye Wi-Fi 802.11 ac, kune zvakare USB Type-A uye Type-C madoko, pamwe ne5 MP kamera sezvingaonekwa mune dudziro yapfuura, zvakare chishandiso chinobatanidza mazhinji e mabasa ekutanga emahwendefa akadai seWiFi kubatana, kamera, akasiyana USB madoko (A, C, micro HDMI, microSD), nezvimwe.
Asi neprojekti iyi, shanduko huru pano dziri mukuti isu tine touch screen uye hapana chikonzero chetambo yemagetsi yekugonesa mudziyo.
Nezve iyo skrini, iyo kambani inotengesa iyo CutiePi inosimbisa kuti yakagadzirirwa kubva pakutanga nharembozha yekushandisa yakanangana neyakavhurika sosi Qt fomati uye inonzi CutiePi goko kuitira kupa vashandisi piritsi rakagadzirira-kushandisa, kunyangwe kazhinji, kune vashandisi vanotenga zvishandiso zvinoenderana neRaspberry Pi mabhodhi vane pfungwa dzepamusoro dzehardware uye software inoda mudziyo kuzvionera.
Ndokusaka kune vashandisi vanoverengeka, CutiePi timu inotaura kuti inogona kuvandudza maficha, kunge skrini (ichipa yakakura skrini ine Full HD resolution), bhatiri rakasimba uye mapini eGPIO, yakapihwa mutengo wechigadzirwa.
Ipo kune vamwe vashandisi izvo chishandiso chingave chisingaitwe nekupihwa hunhu hwayo uye zvine chekuita nemutengo zvakadaro, chero zvingave zvinotaurwa nevamwe, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti vashandisi vazhinji vakaita chirongwa ichi chevanhu vazhinji kubva pakutanga uye vakamirira nemoyo wese kuendesa kwavo piritsi.
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo nezve mudziyo, unogona kutarisa chinongedzo chinotevera.
Kana vari avo vanofarira kuisa odha yavo, vanogona kuzviita kubva pane iyi link iripazasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo Raspberry Pi 4-yakavakirwa CutiePi yave kuwanikwa pre-odha ye $ 199
Dzidziso diki yekurangana Chii chiri kumashure kwema anti Stallmans?